Mgbe ị na-eji ihe Apple ngwaọrụ, i nwere ike mkpa ụfọdụ dị mkpa ma dị mkpa plugins n'ihi na gị iPhoto. Ebe a na-10 iPhoto Plugins na nkọwa na ndị bara uru na-eme ka gị iPhoto ahụmahụ mfe, nchebe na ala.
Plugin 1: oyiri Annihilator
Oyiri Annihilator bụ ihe kasị mma plugin maka iPhoto iji kpochapụ mbiputegharị gị foto site na iPhoto n'ọbá akwụkwọ. Mgbe i nwetara a ibu nke ihe oyiyi si dị iche iche na isi mmalite gị iPhoto albums, ị nwere ike ejedebe ndị sample foto nke otutu mbipụta site na iwepu mfe. Ọ pụrụ iji tụnyere photos dị iche iche usoro nkesa umu ahihia site faịlụ aha, size, ụbọchị nke oyiyi e kere eke, mkpebi nke oyiyi. Nke a oké ngwá ọrụ nwere ike gị ọzọ free nchekwa maka iPhoto albums na a obere mgbalị na-enye gị oké enyemaka si foto mbiputegharị na draịvụ ike gị / nchekwa. Ị nwere ike a dị oke egwu plugin ibudatara na nyere njikọ na $7.95.
Mụta ihe banyere oyiri Annihilator >>
Plugin 2: iPhoto enyi
iPhoto enyi bụ nchebe plugin maka iPhoto na-enye a dị mfe ma na egwu interface maka iPhoto. Ọ bụ nke zuru okè na ezigbo enyi gị iPhoto jikwaa iPhoto ọba akwụkwọ, ịgbanwee multiple ọbá akwụkwọ na-enye gị ịchọ site mkpado aha, na-ekenye thumbnails na nzuzo nchebe maka ọbá akwụkwọ. Ọ bụ a free ọdịnaya ibudata.
Mụta ihe banyere iPhoto enyi >>
Plugin 3: echiche
Echiche na-enye ohere na-echebe gị ihe oyiyi si eji ya maka ndị ọzọ ma na-akawanye watermark na gị foto na-echebe gị nwebisiinka. Ọ bụ ihe dị mkpa na otu nke kasị mma plugin maka iPhoto gị apple ngwaọrụ. Mgbe foto bụ azụmahịa gị, ị ga-mkpa nke ya ngwa ngwa. Echiche dị ibudata si n'okpuru njikọ, na ọ ga-eri ị $9.99.
Mụta ihe banyere echiche >>
GrowlPhoto bụ oké plugin na na ọtụtụ-eji maka iPhoto na Mac ngwaọrụ / apple ngwaọrụ. Ọ na-enyere gị ka ịnye Ịma Ọkwa mgbe ị na-importing si igwefoto ngwaọrụ a ga-okokụre. Ọ bụ a-akpali nnọọ mmasị na-eri ahụ plugin nwere ike ime ka ị pụrụ ịdabere na na ya. Ọ bụ free download si n'okpuru njikọ.
Mụta ihe banyere GrowlPhoto >>
PictureSync bụ a ogbe ebugote plugin eji maka iPhoto na-enye gị ka mmekọrịta gị foto gị Zooomr, Flickr ma ọ bụ Facebook akaụntụ. Ị nwere ike ịdọrọ na dobe foto faịlụ n'ebe ọ bụla ndị ọzọ online foto ebugote sited site na nke a kasị mkpa PictureSync plugin maka iPhoto.
Mụta ihe banyere PictureSync >>
Ị na-nchegbu mbupụ foto na gị Flickr na akaụntụ gị apple ngwaọrụ? FFXporter ga-enyere gị si bulite foto gị site na iPhoto na nkọwa na-enye ohere inwe GPS na mkpado kwa. FFXporter bụ otu n'ime ewu ewu iPhoto plugin ịrụ ọrụ a nke ọma nwere ike ibudata free si n'okpuru njikọ.
Mụta ihe banyere FFXporter >>
Plugin 7: iPhoto Nri
iPhoto Nri bụ a plugin maka iPhoto ngwa na Apple ngwaọrụ. Ọ na-enyere gị iji wepu ma ọ bụ mgbanwe-enweghị isi backups maka foto na thumbnail oyiyi, kpochapụ mbiputegharị, ịchọpụta na-ehichapụkwa anya mmiri faịlụ na nchekwa nke na-enweghị isi. iPhoto Nri nwere ike ibudata site n'okpuru njikọ free.
Mụta ihe banyere iPhoto Nri >>
iPhoto Library Manager bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu iPhoto plugin na-enye gị na-eme ka na na-ejikwa multiple ọba akwụkwọ na iPhoto. Nke a album nwere ike ịchekwa akọrọ nchekwa, mpụga nchekwa ma ọ bụ esịtidem diski ike gị Mac. Ọ na-akwado gị iji wughachi rụrụ arụ iPhoto albums ma na-n'ime ihe oyiyi si a mebiri emebi album / n'ọbá akwụkwọ. iPhoto Library Manager nye gị nweta idetu, jikota ma ọ bụ mmekọrịta n'etiti ọba akwụkwọ na-apple ngwaọrụ. Ọ bụ free on a ikpe ma na-efu $29.95 na zụọ.
Mụta ihe banyere iPhoto Library Manager >>
Plugin 9: FlickrExport maka iPhoto
Ahịa: Single akwụkwọ ikike: $20.99, nweta nkwalite si V3: $10.95
Flickr nwetara nnọọ mfe ma dị ike n'ụzọ jikwaa gị uploaded foto gị iPhoto. Ọ ga-enye gị ihe ùgwù bulite videos na otutu Flickr akaụntụ. Ọ ga-ekwe ka ị na dezie, nzuzo akara, mkpado, gbakwunye foto Flickr Group Pool na foto resize mgbe ebugote. Ọ ga-eri gị ka ị na-eji, na i nwere ike ibudata ya na isi iyi njikọ.
Mụta ihe banyere FlickrExport maka iPhoto >>
Plugin 10: Shutterfly Export nnyemaaka maka iPhoto
Shutterfly Export nnyemaaka maka iPhoto bụ a plugin nke Shutterfly na ka ị na bulite gị ihe oyiyi site iPhoto ka Shutterfly akaụntụ. Ị nwere ike nwere ohere ime ka a ọhụrụ album na bulite photos ozugbo na ya ma ọ bụ ẹdude onye ị na-ama kere. Shutterfly popularly mara dị ka a foto nkekọrịta na foto oru ngo-eke website. Ị nwere ike Shutterfly iPhoto plugin ebudatara free si nyere njikọ.
Mụta ihe banyere Shutterfly Export nnyemaaka maka iPhoto >>
> Resource> Mac> Top 10 Bara Uru iPhoto Plugins